Sound Devices, LLC သည်၎င်း၏ Rack-Mount Recorders ၏ပြည့်စုံသော Firmware Update ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အသံဖုန်းများအတွက်, LLC သိုလှောင်ဆင်-တောင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများက၎င်း၏အပြည့်အဝလိုင်းများအတွက်ဘက်စုံ Firmware Update ကိုကြေညာ
အသံဖုန်းများအတွက်, LLC သိုလှောင်ဆင်-တောင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများက၎င်း၏အပြည့်အဝလိုင်းများအတွက်ဘက်စုံ Firmware Update ကိုကြေညာ
REEDSBURG, WI, နိုဝငျဘာ 24, 2015 - အသံဖုန်းများအတွက်, LLC သည်၎င်း၏ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပါဝင်သော ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်, ကိုကြေညာ firmware ကိုဗားရှင်း 2.20 ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက် Pix 270i နှင့် Pix 250i video recording အပါအဝင်ထိန်သိမ်း-mount ဖြေရှင်းနည်းများ, ၎င်း၏အပြည့်အဝ suite ကိုအဘို့နှင့် အသံဖုန်းများအတွက် 970 အသံအသံဖမ်း။ ဒါကနောက်ဆုံးပေါ် firmware ကိုတော်တော်များများအသံ features တွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတိုးတက်မှုအပါအဝင် system ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ, အချိန်ထပ်တူ, ဖိုင်လွှဲပြောင်းနှင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း, နှင့် PIXNET ™ကို web interface ကိုပေးပါသည်။
အများအပြားကအသံ features တွေလက်နက်ချအပုဒ်တစ်ခု updated အမြင်အာရုံအမှတ်အသားအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကိုထိန်သိမ်း-mount လိုင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကိုခြေရာခံစက်များကိုဖြစ်ပါတယ်အခါတိုင်းအခုတော့အသံမီတာမီးခိုးရောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အထွတ်အထိပ်ကိုင်အချိန်အသုံးပြုသူလုံးဝဒီ feature ကိုပိတ်ထားနိုင်စွမ်းအတူ preference ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, one- မှငါးစက္ကန့်မှာအထွတ်အထိပ်ကိုကိုင်တင်ထားရန်ခွင့်ပြု, စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစျခုထက်ပိုအသံဖိုင် features တွေအဝင်ကဗီဒီယိုအချက်ပြဘို့ဆူညံသံလျှော့ချရေးနှင့်အစာရှောင်လမ်းကြောင်းတပ်ဆင်ပေးခြင်းများပါဝင်သည်။
970 နှင့် 270i အသုံးပြုသူများအတွက်တစ် Dante redundancy configuring များအတွက် menu ကို setting အသစ်က Dante, နှင့်ယူနစ်ကနေတိုက်ရိုက်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းအိုင်ပီ parameters တွေကိုလည်းမရှိ။ ဒါ့အပြင် 970 နှင့် 270i များအတွက်သက်ဆိုင်အပေါင်းတို့, metadata ကိုတည်းဖြတ်ယူယခင်, လက်ရှိအဘို့အအုပ်စုဖွဲ့အသံဖမျးဖို့ ripple နှင့်နောက်တစ်နေ့မြင်ကွင်းအပါအဝင်ကြာ, မှတ်စုများ, လမ်းကြောင်းအမည်များ, စက်ဝိုင်းအခြေအနေ, မှားယွင်းသောကြာနှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုနှစ်တိုး။ ဒါက backup လုပ်ထားအသံဖမ်းမာစတာ၏စစ်မှန်သောမှန်အောင်, တစ်ဦးမာစတာအသံဖမ်းနှင့်၎င်း၏ backup လုပ်ထားအကြားမီတာဒေတာ၏အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ခွဲဝေမှုနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ။
အိမ်သူအိမ်သားရည်ညွှန်းထံမှအချိန်ကိုက် offset စိတ်ကြိုက်နိုင်စွမ်းအပါအဝင် Pix 270i များအတွက်အများအပြား timecode ထပ်တူတိုးမြှင့်မှုများရှိပါတယ်။ ရပ်တန့် mode မှာ, အနက်ရောင် SDI ကနေအထွက်ရှိရာတစ်ဦး feature အသစ်လည်းဖြစ်ပါတယ် HDMI ရလဒ်။ ဤသည် stop နဲ့ပြန်ဖွင့်အကြားသို့ပြောင်းသောအခါတစ်ဦးချို့ယွင်း-အခမဲ့ synchronous output ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုခငျြတဲ့သူထုတ်လွှင့်မယ့်သော့ကိုအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ firmware ကို v2.20 နှင့်အတူ, Pix 270i အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းအဝင်ထပ်တူပြုခြင်း input ကိုမှဆွေမျိုး, အလျားလိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ဖြစ်စေ, ဗီဒီယိုပြန်ဖွင်၏ထေအချိန်ကိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Pix 270i များအတွက်အပိုဆောင်းပြန်ဖွင့် features တွေတူဖိုင် res-rate နှင့် codec ၏ဖိုင်တွေကိုဖြတ်ပြီးဗီဒီယိုနှင့်အသံများချောမွေ့စွာပြန်ဖွင့်ပါဝင်သည်။ ဤဖိုင်-အုပ်စုခွဲအသံသွင်းသို့မဟုတ်ဖွင့်စာရင်းများကို၏ပြန်ကျော့များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ထားသော Multichannel .wav file တွေကိုပြန်ဖွင်ဖို့ Pix 270i နှင့် 970 များအတွက်စွမ်းရည်အဖြစ်အဖြစ်ကောင်းစွာဒီ firmware ကိုသို့အများအပြား Cross-ထုတ်ကုန်လိုက်ဖက်တဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ် အသံဖုန်းများအတွက် Pro ကို Tools များမှတဆင့် edited 6- နှင့် 7-စီးရီးထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဖိုင်များကို®, Adobe ကစာရင်းစစ်®, ဒါမှမဟုတ် Audacity®။ ဗီဒီယိုအခြမ်းတွင် Pix 270i နှင့် Pix 250i နှစ်ဦးစလုံးယခု Apple က၏ပြန်ဖွင့်ကိုထောကျပံ့® ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက် Pix-E422 နှင့် Pix-E4444H မှတ်တမ်းတင်မော်နီတာကနေ ProRes5နှင့်5.mov ဖိုင်များကို။ အဆိုပါ Pix 270i လည်း Non-ဇာတိ ProRes ၏ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် DNxHD ထောက်ခံပါသည်® အပါအဝင် Non-linear အယ်ဒီတာများအနေဖြင့် 16 အသံစီးမှတက်နှင့်အတူ QuickTime .mov ဖိုင်တွေ လွန်စွာလိုလားသော®, နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကို®နှင့် Adobe ကပရီးမီးယားလိဂ်®.
အားလုံးထိန်သိမ်း-mount ထုတ်ကုန်တွင်, မှားယွင်းသောကြာယခုဆက်ကပ်အပ်နှံမှားယွင်းသောသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်အစားဖျက်ပစ်ခံရ folder ကိုကြာပါတယ်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်ဒီအအသုံးပြုသူများ re-access ကိုထိုကဲ့သို့သောဖိုင်များခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ Web Interface ကို, PIXNET လည်း PIXNET ကနေတိုက်ရိုက်မိစ္ဆာယူအဖြစ်ယူမှတ် generate နှင့်အသံကအစီရင်ခံစာများကို download လုပ်ပါ, နှင့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများစာရင်းစီမံခန့်ခွဲ, ရှိသမျှနိုင်စွမ်းအပါအဝင်အချို့သိသိသာသာတိုးမြှင့်မှုများ, မမြင်စဖူး။
အဆိုပါထိန်သိမ်း-mount ထုတ်ကုန်များအတွက် firmware ယခု free download, များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်:
Pix 270i: www.videodevices.com/support/downloads/pix270i-firmware
Pix 250i: www.videodevices.com/support/downloads/pix250i-firmware
အတော်များများက features တွေ, အပြောင်းအလဲ, ဤ firmware ကို update ကိုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းများလည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအများအပြားထုတ်လုပ်မှုပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်နေဆဲဖြစ်သောမှရပ်စဲ Pix 260i ဗီဒီယိုအားကုန်းပတ်, သက်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏ဒေါင်းလုပ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်: www.videodevices.com/support/downloads/pix260i-firmware
ချောမွေ့စွာ tape- နှင့် disc ကို-based ကိုဗီဒီယိုကုန်းပတ်အစားထိုး, ထိန်သိမ်း-mount ထုတ်ကုန်များ Pix လိုင်းမျိုးစုံ-Source ကိုဗီဒီယိုအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်ဘဏ်ဍာ, နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု၏အကွာအဝေး addressing ကိုပြီးပြည့်စုံသောယဇ်ဖြစ်သတည်း။ အသံဖုန်းများအတွက် 970 Dante နဲ့ MADI တစ်ဦးအထင်ကြီး 64 လိုင်းများဝါကြွားသောကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံး-အစဉ်အဆက်ကိုအနု, အသံသာထိန်သိမ်း-mount ဖြေရှင်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, ဒီဇိုင်းများ အသံဖုန်းများအတွက် အသံထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသံဖုန်းများအတွက် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, သတင်းစုဝေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်မိုဘိုင်း, တီဗီ, ရုပ်ရှင်နဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဘဏ်ဍာအပါအဝင်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးဖြေရှင်းပေးသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်, မော်နီတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဌာနချုပ် Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းရုံးများ Madison, Wisconsin ပြည်နယ်, ချီကာဂိုနှင့်ဘာလင်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့် / သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ 2015-11-24
ယခင်: Dejero မှစ. တိုက်ရိုက် + NewsBook Software ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြန့်ချိတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုလွှများအတွက် BGAN-HDR နှင့် Bond ဖွင့်မည်